The Title Of The Song Is Unity In Burma - The Chin Celebrities
The Title Of The Song Is Unity In Burma
August 6, 2020 August 6, 2020 1 min read hleicung@gmail.com
The title of the song is “Unity in Burma” but the presentation isadirect attack on the NLD. Just think of it as acting. Do not see us as collaborating with the other party. I want to ask Ko Yone Lay not to make the same mistake that makes artists hate the audience, “said actor Win Myaing.
The song was performed with good intentions. I learnedalesson. Later, if you make art, you will be accepted after careful scrutiny from beginning to end. “I’m not blaming anyone at the moment. I’m blaming myself.Today, public criticism of the MTV song “Unified Burma (Our Land)” by singer Yone Lay has risen.
Aung San Suu Kyi,aclose security guard for State Counselor Aung San Suu Kyi, also posted on her Facebook page about the MTV filming. “I just want to be united. I never thought of him like that. I never thought of him like that. I love Mother Suu.”
"ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ " MTV ပွဲဆူ၊ ယုန်လေးပြန်ဖြေရှင်း
"ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ " MTV ပွဲဆူ၊ ယုန်လေးပြန်ဖြေရှင်းအဆိုတော်ယုန်လေးစီစဉ်ရိုက်ကူးသည့် "စည်းလုံးသင့်ပြီမြန်မာပြည် (ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ) MTV သီချင်းရိုက်ကူးပုံဖေါ်မှုအား ယနေ့ပြည်သူများ ဝေဖန်ပြောဆိုမှုမြင့်တက်ခဲ့သည်။စည်းလုံးသင့်ပြီမြန်မာပြည်(ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ) MTV သီချင်းအားယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင်အဆိုတော်ယုန်လေး၏ Original Gangster Page မှတဆင့် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်သို့ ပျံ့နှံ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။၎င်း MTV တေးသီချင်း အားအဆိုတော်ယုန်လေးမှ စီစဉ်ရိုက်ကူးကာ ၎င်းအပါအဝင် သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်အယောက် ၇၀ ဖြင့် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။စည်းလုံးသင့်ပြီမြန်မာပြည်(ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ)သီချင်းအား MTV ရိုက်ကူးရာတွင် လက်ရှိနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များအားလုပ်ကြံတင်ပြပုံ၊နိမိတ်ပြရုပ်ပုံများပါဝင်ခဲ့ခြင်း၊ တပ်မတော်အား ကယ်တင်ရှင်သဖွယ် ဇာတ်လမ်းဆင် ရိုက်ကူးထားမှုများ အပေါ်ပြည်သူအများဝေဖန်ပြောဆိုမှုများမြင့်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။၎င်း MTV ရိုက်ကူးပုံဖေါ်မှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အနီးကပ်လုံခြုံရေး သက်တော်စောင့် မချယ်ရီထက်မှလည်း ၎င်း၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် "ပေးချင်တဲ့ Message ကဘာလဲ???၊ ဘာပြောချင်တာလဲ၊ မကြိုက်ဘူး(စော်ကားတာလား) "ဟု ယနေ့ရေးသားထားသည်။လက်ရှိဝေဖန်နေသူများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး "ကျွန်တော့်မှာစည်းလုံးစေချင်တဲ့ စိတ်ပဲရှိပါတယ်၊ သူ့လိုအတွေးမျိုးအတွေးထဲကတောင်မတွေးရက်သလို အဲ့လိုအတွေးမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး၊ ကျွန်တော်လည်းအမေစုကိုချစ်တဲ့သူပါ၊ အမြဲတမ်းမျှတအောင်တွေးပါတယ်၊ ဘာသာရေးဆိုလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲခင်ဗျား၊ ဘာသာတိုင်းကို Respect ရှိပါတယ်၊ ကျွန်တော်တင်တဲ့ Post တွေကြည့်ရင် ကျွန်တော့်စိတ်ဓါတ်ကိုသိနိုင်ပါတယ် "ဟု အဆိုတော် ယုန်လေးက ၎င်း၏ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှ တဆင့်ယနေ့ရေးသားဖြေရှင်းခဲ့သည်။MTV ရိုက်ကူးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံအား ဝတ်ဆင်ရိုက်ကူးမှုများရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိတည်ဆဲ အခြေခံဥပဒေများအရ နိုင်ငံတော်အလံကိုနိုင်ငံတော်၏ ကိုယ်စားသော်လည်းကောင်း၊ တစ်မျိုးသားလုံး၏ ကိုယ်စားသော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ အပပစ္စည်းတစ်ခုခု၏ အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အဝတ်အထည်ခြယ်လှယ်မှုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဝတ်ဆင်မှုအဖြစ် လည်းကောင်း သုံးစွဲခြင်းမပြုရဟုပါရှိပြီး ၎င်းတားမြစ်ချက်အား ဖောက်ဖျက်ပါက သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်သုံးသိန်းထက် မပိုသောငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်ဟု ပြဌာန်းထားသည်။youtube link https://youtu.be/8OWj37ZbBMk
Posted by ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသတင်းကွန်ရက် on Tuesday,4August 2020
In le Motor Laksawngacawk piak Actor Paing
UNIVERSITY ENTRANCE An Phi Lai I Quality “A” Hmuhmi